टिचिङ अस्पतालमा उडुस, उपियाँ, साङ्ला मार्न टेन्डर - Naya Pageटिचिङ अस्पतालमा उडुस, उपियाँ, साङ्ला मार्न टेन्डर - Naya Page
काठमाडौं, ३१ साउन । मुसा, उडुस, उपियाँ, साङ्ला मार्न त्रिवि शिक्षण अस्पतालले टेन्डर आव्हान गरेको छ । जब कि यो अस्पताल स्वास्थ्य सेवामा उतकृष्टताको नमुना (सेन्टर अफ एक्सिलेन्स) को बाटोमा अग्रसर छ ।
तर, विभिन्न विभाग / शाखा / वार्ड / ओपीडि, युनिटलायगत स्थानमा मुसालगायत नियन्त्रण गर्नुपर्ने शुक्रबार प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । अस्पतालका कोभिड १९ व्यवस्थापन समितिका संयोजक एंव वरिष्ठ छातिरोग विशेषज्ञ डा. सन्तकुमार दासले मेसिनका औजार, तारहरु काटेर मुसाले दुःख दिने गरेको बताए ।
बिरामीको उपचार गरिने वार्डमै गएर मुसा छिर्‍यो भने त गाह्रो हुन्छ । मनिटरलगायत मेसिनका तारहरु काट्ने गर्छ डा. दासले भने । यसरी कीरा मार्ने काम हरेक वर्ष हुने गरेको डा. दासले बताए ।
मुसाले भेन्टिलेटर, वायरिङ, सर्भरको तार काटेर दुःख दिइरहेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. दिनेश काफ्लेले बताए । ‘कीरा मार्न, केही व्यक्तिलाई बोलाए जसरी काम गर्न मन लागेन’, निर्देशक काफ्लेले भने, ‘प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता होस् भनेर पहिलो पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव आह्वान गरेका हौं ।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट